Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa har'a dhimma Oromoo irratti marii taa'a - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa har’a dhimma Oromoo irratti marii taa’a
Ajjeechaan, ukkaamsaa fi dhabamiini kabaja mirga namaa kan isa yaachise Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa, guyyaa har’aa dhimma Oromoo fi Itoophiyaa irratti marii bal’aa geggeessa. Murtii cimaas ni dabarsa jedhameeti kan eegamu.
Miseensonni paarlaamaa dhimma Oromoo deeggaruudhaan sagalee isaanii akka laataniif Oromoo fi kanniin yakka mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti baatii lamaa oliif raawwatamaa jiru balaaleffatan bifa addaddaan dhiibbaa godhaa turan. Irra jireessatti kan itti dhimma bayamaa ture Miidiyaalee hawaasaati. Guyyoota lamaan darbaniif sochiin karaa Twitter’n ‪#‎PasstheMotion‬ jedhamutti dhimma bayuun dhiibbaan guddaan godhamaa ture. Dhiibbaan kuni har’a hanga sa’aa 17’tti ciminaa fi bal’inaan itti fufuu qaba.
Kana godhuuf akka isin dandeessisu asii gaditti garee gurguddaa Paarlaamaa Awurooppaa keessatti argamuu fi maqaa hoogganootaa (Twitter isaanii woliin) keenneerra. Kallattiidhaan twit isaaniif godhuudhaan akka Oromoo bira dhaabatan, ummata dhumaa fi ukkaamamaa jiruuf dubbatan, dhimma dimokraafi mirga namaaf irratti tankaarfii fudhatan (dhiibbaa) godhaa.
ALDE Group Guy Verhofstadt @GuyVerhofstadt
S&D Group Gianni Pittella @giannipittella
PPE Group Manfred Weber @ManfredWeber
ECR Group Syed KAMALL @SyedKamall
EFDD Group Nigel Farage @Nigel_Farage
GUE/NGL Group Gabriele Zimmer GUE/NGL
Paarlaamaa Awurooppaa akka wolitti dhufee dhimma Oromoo irraa mari’atuu fi dubbatu kan dirqe qabsoo baatii lamaa oliif godhameedha: Dhiiga obboleewwan keennaati. Bu’aa waaree, injifannoo kallattii hundaa, galmeessisuuf, qabsoon eegalame kallattii hundaan cimee geggeeffamuu akka qabuudha worri xiinxalaa siyaasaa geggeessan kan gorsan.
Toora intarneetiin worri marii Paarlaamaan Gamataa Awurooppaa geggeessu hordofuu feetan asbira cuqaasaa.
ajjeechaa fi ukkaamsaa
labsii paarlaamaa awurooppaa
mormii maaster pilaanii
paarlaamaa gamtaa awurooppaa
Previous articlePaarlaamaan Awurooppaa Itoophiyaan Oromoo ajjeesuu, ukkaamsuu fi laffaarraa buqqisuu hatattamaan akka dhaabdu gaafate
Next articleGareen hayyoota mirga namaa addunyaa Itoophiyaan gidiraa Oromoo irraan geettu akka dhaabdu gaafate